Nandritra ny fisafoana nataon'ny Polisy tao antampon-tananan' Ambanja no nahatsikaritra lehilahy miisa 03 nitondra entana nampiahiahy tamina gony ny Polisy. Nosavaina avy hatrany ireo entana ireo ka rongony milanja 102 kilao no hita tao. Nentina namonjy birao avy hatrany ireo lehilahy miisa 03 ireo nanaovana fanadihadiana. Fantatra fa rongony saika hamidy ao an-toerana ihany ireto tra-tehaky ny polisy ireto. Nogiazana avy hatrany ireo rongony milanja 102 kilao ireo ka rehefa vita ny famotorana natao tamin'ireo lehilahy miisa 3 ireo ny 01 aprily 2020 dia nodorana avokoa ireo rongony. Izy telolahy kosa dia naiditra am-ponja vonjimaika avokoa rehefa avy natolotra ny fampanoavana.